Dhinda muPDF maneja ekugadzirisa zvinyorwa zviri nyore | Ndinobva mac
Chinhu chimwe chiri pachena ndechekuti nhasi iyo PDF format Yakapararira kwazvo uye mamirioni avanhu vanoishandisa mazuva ese. Munyika yekudzidzisa, kunova kwandinoshandira, mhando iyi yemafomati yakakosha uye, kubva ku Ministry of Dzidzo, vafunga kuti Microsoft Office hapana kana chinhu, saka kana ndichida kushanda muIzwi, semuenzaniso, uye tora mafaira uende neni kunzvimbo yebasa kuti ndiashandise ndinofanira kuadhinda muPDF.
Sezvaunenge uchitoziva, kubva kuMacOS unogona kugadzira mapepa ePDF nenzira yakapusa kwazvo kubva kubhokisi rekudhinda pachako mune chero chishandiso chinotendera icho.
Zvino, iwe paunodzvanya paFaira> Dhinda, mubhokisi rebhokisi rinoonekwa iwe uchaona, muzasi kuruboshwe, kuti pane kudonha pasi nechidimbu PDF. Nekudzvanya pakudonhedza uku iwe unogona kusarudza Sevha sePDF ... mushure meizvozvo sisitimu inokumbira iwe izvo kubva pazita refaira wobva wataura kwaunoda kusevha.
Paunoita izvi pane dzinoverengeka nguva iwe unogona kutora nguva yekutevera nhanho idzi dzese, asi kana iwe ukaita yakawanda pazuva zviri nani kugadzira kufambiswa kwebasa kuri mune imwecheteyo menyu yeiyo yekudhinda hwindo, mune iyo PDF kudonha-pasi ngatitangei paHedha menyu ... Iwindo rinotaridzwa roga umo matinogona kugadzira mafambiro ekufambisa nekudzvanya + chiratidzo.
Nekutsikirira iyo + isu tinofanirwa kusarudza nzvimbo kwatinoda kuti mafaera ePDF achengetedzwe otomatiki. Kune izvi isu tinofanirwa kugadzira yakasarudzika nzvimbo. Mune yangu kesi ini ndagadzira imwe nyowani inonzi PDF Mafaira mukati meMagwaro dhairekitori. Iyo dhairekitori iyo iri muMapepa inoenderana neICloud uye nekudaro nemamwe mafaera andinawo.
Iniwo ndakadhonza dhairekitori racho kuDock kurudyi kuti riwanikwe nguva dzese. Kubva ikozvino zvichienda mberi, zvese zvandinofanira kuita kana ndichida chimwe chinhu muPDF chadzvanya pane Faira> Dhinda> Kudonhedza> Faira rePDF
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Dhinda kune PDF kuti uchengetedze zvinyorwa zviri nyore